I-DOMY CHEMICAL CO., LTD
Inkampani yethu yadluliswa isuka efektri yamakhemikhali iYongnan yaya eDomy Chemical Co., Ltd., ekhiqize umuthi wokuxubha wokuqala waseChina oqukethe i-fluorine ku 1999. Ngokuhola kwe-CEO uMnu. Yang Zhiquan, imikhiqizo yethu yokunakekelwa komuntu siqu iya ikhula ngamandla, futhi kancane kancane ifinyelela kumikhiqizo yepulasitiki, ezokuvakasha ezimbonini, ukunakekela impilo, isiko lokuzijabulisa, kuze kube manje selikhule laba yiqembu lezimboni ezahlukahlukene.
Le nkampani iye yagcina yesikhathi eside ukucutshungulwa ubuhlobo nokubambisana ezingaphezu kuka 50 izinkampani ezithengisa ngqo ezisezingeni eliphakeme, izinkampani ze-wechat-business, izinkampani zokuthengisa online kanye ne-Australia nezinye izinkampani zaphesheya. Kubandakanya okungapheli, Isikhumba se-Nu, I-Kangmei yezemithi, Iqembu leTiens, osephenduke iphayona lomkhakha womkhiqizo wokunakekelwa ngomlomo nangokomuntu siqu.
UDomy unochwepheshe, zifane futhi zisebenze kahle ithimba lebhizinisi, ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme ze-ODM ne-OEM kumakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe. Sigcine ubuhlobo besikhathi eside sokubambisana nabangaphezu kuka- 50 ukuthengisa okuqondile okuvelele, izinkampani ezinamabhizinisi amancane kanye ne-E-commercial ekhaya nakwamanye amazwe.
UDomy uphikelela kumqondo wokulawulwa kwekhwalithi jikelele we "zero zero kumikhiqizo". Ilabhorethri yokuhlola inekamelo lokuhlola le-microbiological elisezingeni elingu-10,000 futhi linezinto ezihola phambili zokuhlola elebhu embonini.
I-workshop yokukhiqiza iDomy iyi-workshop ehlanzekile ye-GMP engu-100,000, esidlule uHalal, Uhlelo lokuphathwa kwamazwe omhlaba lwe-GMPC kanye ne-ISO22716. Isikhungo sokukhiqiza sine 12 imigqa yokukhiqiza, indawo yokuwasha neyamakhemikhali inayo 8 manje. Amandla wonyaka wokukhiqiza wokuxubha amazinyo yi 20,000+ amathani.
Ngokucabangela ukukhiqizwa okusebenzayo komuthi wokuxubha ozisekelayo, Inkampani engaphansi kukaDomy inamasethi amabili wezintambo zokukhiqiza zamapayipi zePSG zakamuva ezingeniswe eSwitzerland, ngokukhishwa konyaka okungaphezu kwe- 250 izigidi zamapayipi, ezihlangabezana ngokugcwele nezidingo zokucubungula ezenziwe ngezinhlobo zomkhiqizo wamakhasimende kanye nokucaciswa.
Imikhakha yethu yomkhiqizo
Isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi nohhafu, besilokhu sikhiqiza imikhiqizo yokunakekelwa kwamazinyo nomlomo ehamba phambili. Futhi ukunweba lokho kumamatheka kube kumamatheka, sandise uhla lwethu lomkhiqizo saba yimikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu. Siyakwazi nokusingatha izicelo ezikhethekile zokupakisha, kufaka phakathi amabhodlela akhelwe ngokwezifiso namasethi wesipho semikhiqizo eminingi.
· Yenza imikhiqizo esezingeni eliphakeme ukuze ihambisane nezidingo zamakhasimende.
· Ukucwaninga ukwakheka okusha nokubheka intuthuko yomhlaba.
· Phatha izindleko ezandayo zokusebenza.
Amandla we-Domy kusuka ocwaningweni nasekuthuthukisweni nasekukhiqizeni nasekusabalaliseni anikezela ngezinsizakalo ezinhle kakhulu ze-OEM ne-ODM kumakhasimende ethu..
Bengilokhu ngisebenzisa lo mkhiqizo iminyaka, futhi ngeneliseke ngokuphelele ngemiphumela. I-Scope ifake umuthi wokuxubha ushiya umlomo wami uzizwa uhlanzekile ngaphandle kwaloko okwesabekayo ngemuva kokunambitheka okushiywe yiminye yokuxubha. Ngokwengeziwe, Angikaze nginakekele lezo zinhlayiya ezinamandla zeminti ezinamakha; lo mkhiqizo uqine ngokwanele ukukunika umuzwa womlomo ohlanzekile ohlala njalo.
Ngiyayithanda le nto yokuxubha futhi ngiyale i- 3 ukupakisha. Ifikile ngavele ngayigcina ekhabetheni ngaze ngadinga ithubhu entsha. Ngivule iphakethe le-cellophane namuhla ukususa eyodwa 3 amabhokisi futhi ngathola ibhokisi elilodwa lisavaliwe kodwa lingenalutho ngokuphelele. ngakho kimi noma yimuphi umnotho kungenzeka utholwe ngokuthenga 3 ngasikhathi sinye yehliselwa kunoma yiliphi iphuzu lentengo ezimbili ngasikhathi sinye ebelingaba khona. Ungalindi ukuvula i-cello esongwe 3 iphakethe lamabhokisi. Vula bese uhlola okuqukethwe ngaphambi kokugcina
Ungalokothi ukhumbule ukusebenzisa noma yini ngaphandle kwe-Soothe & Care. Ayikaze ibe nezimbobo futhi inamazinyo amhlophe amhlophe ngisho nalapho isineminyaka yobudala 71. Mayelana 5 yrs edlule, ngenxa yezinkinga ezithile zokuphefumula ngenxa yokubhema, Ngaqala ukusebenzisa i- "umuthi" ijeli. Yayinakekela inkinga yokuphefumula, kodwa ngemuva kweminyaka embalwa, Ngithole umgodi! Ukuhlolwa okusheshayo kuveziwe -- akekho umlwi womgodi. Ama-YIKES! Wabuyela eCrest, kodwa indaba ende emfushane, manje ngikuhlanganise nejeli. Konke kuhamba kahle, kuze kube manje.
UJohn DoeUmphathi omkhulu
Kwenziwe ngentando Flavour?
Yebo, sinikeza ukunambitheka njengoba ubudinga.
Iyini inqubekela phambili ye-OEM?
1.Xhumana nathi ukuthola isampula noma usithumelele isampula lakho
2.Hlola isampula bese uqinisekisa ifomula
6.30% idiphozi ngaphambi kokukhiqizwa
7.70% phansi inkokhelo ngaphambi kokubeletha
I-ISO22716 GMPC FDA Halal
Isevisi ye-OEM noma ye-ODM iyatholakala, ukupakisha njengemfuneko yakho
Yebo, singahlinzeka ngamasampula amahhala futhi sizokwazisa uma ungakhokhela imali yezimpahla.
2021年6月4日	Awekho amazwana
2021年5月24日	Awekho amazwana
2021年5月7日	Awekho amazwana
Thola ukuxhumana manje
Singaphendula imibuzo yakho kangcono uma sazi okuningi ngawe kanye nensizakalo(s) oyifunayo. Sicela ugcwalise ifomu elingezansi. Ilungu labasebenzi bethu lizokuthinta ngqo.